Ithegi: ssl | Martech Zone
Ndirhoxisile ukuBika kweWebhusayithi yam ngexabiso kunye nezixhobo zoHlahlelo lweDiib
NgoLwesihlanu, Meyi 22, 2020 NgoLwesihlanu, Meyi 22, 2020 Douglas Karr
I-Diib luhlalutyo lwewebhusayithi olufikelelekayo, ukunika ingxelo, kunye nesixhobo sokwenza ngcono esibonelela abathengisi be-DIY ngalo lonke ulwazi abaludingayo lokukhulisa ishishini labo.
Uyikhusela njani i-WordPress ngamanyathelo alula ali-10
NgoMvulo, Februwari 10, 2020 NgoLwesibini, Februwari 11, 2020 Akshat Choudhary
Ngaba uyazi ukuba ngaphezulu kwe-90,000 hacks izanywa umzuzu ngamnye kwiziza zeWordPress kwihlabathi liphela? Ewe, ukuba unayo iwebhusayithi ene-WordPress, loo mgaqo kufuneka ukhathazeke. Ayinamsebenzi ukuba uqhuba ishishini elincinci. Abagculi ababandlululi ngokusekwe kubungakanani okanye ukubaluleka kwewebhusayithi. Bajonge kuphela nakuphi na ukuba semngciphekweni okunokuthi kusetyenziselwe inzuzo yabo. Usenokuzibuza- kutheni le nto abahlaseli bejolise kwiindawo ze-WordPress kwi
Iindlela ezili-10 ze-Ecommerce eziya kubona uzalisekisiwe ngo-2017
NgoLwesithathu, ngoFebruwari 1, 2017 Lwesine, ngoFebruwari 2, 2017 Douglas Karr
Kwakungekho kudala kakhulu ukuba abathengi babengenako ukonwaba ukufaka idatha yabo yamakhadi etyala kwi-Intanethi ukuze bathenge. Abakhange bayithembe indawo leyo, abakholwanga yivenkile, abakhange bathembe nokuhanjiswa… abakhange bathembe kwanto. Kwiminyaka kamva, nangona kunjalo, kwaye umthengi ophakathi esenza ngaphezulu kwesiqingatha sazo zonke izinto abazithengayo kwi-Intanethi! Idityaniswe nomsebenzi wokuthenga, ukhetho oluncomekayo lwamaqonga e-ecommerce, unikezelo olungapheliyo lweendawo zokuhambisa, kunye
Amacandelo ama-7 e-SEO amaQhinga aphambili ekufanele ukuba uwathumele ngo-2016
NgoLwesine, Meyi 12, 2016 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, ndibhale ukuba i-SEO ifile. Isihloko sasiphezulu ngaphezulu, kodwa ndimi kumxholo. UGoogle wayekhawuleza abambe ishishini elalinee-injini zokukhangela kwaye zikhokelela kumgangatho weinjini zokukhangela ziyehla kakhulu. Baye bakhupha uthotho lwee-algorithms ezingakhange zenze kube nzima ukusebenzisa i-rankings yokukhangela, bade bangcwaba abo babafumene besenza i-SEO emnyama. Ayiyiyo loo nto
Thursday, May 12, 2016 Saturday, February 13, 2021
I-Yoast SEO: Ii-URL ze-Canonical kwiSayithi ene-SSL ekhethiweyo
NgoLwesithathu, ngoFebruwari 10, 2016 Douglas Karr
Xa sihambisa indawo yethu sayisa kwiFlywheel, khange sinyanzele wonke umntu kunxibelelwano lwe-SSL (i-https: // url eqinisekisa unxibelelwano olukhuselekileyo). Asikagqibi koku. Singaqinisekisa ukuba ukungeniswa kweefom kunye nenxalenye ye-ecommerce zikhuselekile, kodwa akuqinisekanga malunga nenqaku eliqhelekileyo lokufunda. Ngale nto engqondweni, saqonda ukuba amakhonkco ethu abhaliweyo abonakala ekhuselekile kwaye engakhuselekanga. Andifundanga kakhulu kwifayile ye-